अमरदीप मोक्तानको विचार: राजपाको आन्दोलन मुस्लिम लिगको जस्तो नहोस् « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अमरदीप मोक्तानको विचार: राजपाको आन्दोलन मुस्लिम लिगको जस्तो नहोस्
१५ जेष्ठ २०७४, सोमबार ००:००
प्रसङ्ग पुनः राजपाको अन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अथक प्रयासपछि नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको संविधानलाई संस्थागत गर्न चुनावको अनिवार्यता बुझ्दा बुझ्दै राजपाले बिनातालको मादल किन बजाएको हो ? के राजपा को भित्रि चाहना भनेको संबिधान लाए असफल बनाउनु नै हो त ? विश्वमा कुनै पनि देशमा सतप्रतिशत स्वीकार्य भएको संविधान निर्माण भएको छैन । त्यस्तै गरी नेपालको संविधान पनि शतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भन्नु गलत हुने छ । तर यसो भन्दैमा नेपालको संविधान अति नराम्रो छ, कामै न लाग्ने छ भन्नु चाहिँ नियतमा खोट हो भन्ने बुझिन्छ । लोकतान्त्रिक विधिको पालना नगर्दै राजपाको माग मान्नुपर्ने र राजपाले अघि सारेका माग सम्बोधनमा व्यवधान उत्पन्न हुँदा चुनाव नै बिथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्नु त्यति स्वाभाविक विषय हुन सक्दैन । कसैको इसारामा संविधान असफल बनाउने र नेपालमा अशान्तिको वातावरण निमाणका लागि रचिएको षड्यन्त्रको हिस्सा हो भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
तराई मधेसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ शक्ति र व्यापक जनाधार भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृवको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावमा सहभागी हुने देखेर पराजित हुने भयले राजपाले चुनावमा भाग नलिने निर्णय पनि एक कारण हुन सक्छ । चुनाव हुने नहुने सन्दर्भमा चुनाव जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि संविधान संस्थागत गर्न चुनाव हुने पर्छ । राजपाले चुनावमा भाग लिने वा नलिने उसको अधिकार हो । उसको अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । साथै संविधान संस्थागत गर्न चुनाव अनिवार्य भएको हुनाले सरकारले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि चुनाव गराउनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने, चुनाव बिथोल्नेमा माओवादी, नक्सलवादी, उत्तरपूर्वका सङ्गठन र कस्मिरका अलगाववादी लगायत दलहरु छन् । तर जस्तोसुकै विषम परिस्थिति भए पनि चुनाव त भएकै छ भने नेपालमा चुनाव किन हुन नसक्ने ? संविधान संस्थागत गर्न अब हुने भनिएको चुनाव अनिवार्य हो । तसर्थ चुनाव नहुने नगराउने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । अहिले पनि समय छ, सकेसम्म विधिसम्मत ढङ्गले राजपालाई पनि चुनावमा आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यदि त्यसो नभएमा पनि चुनाव चाहिँ हुनैपर्छ ।
प्रकाशित मिति: May 29, 2017